साम्राज्ञीविरुद्ध मुद्दा, १० करोड क्षतिपूर्तिको माग, कति उचित ? | Citizen Post News
साम्राज्ञीविरुद्ध मुद्दा, १० करोड क्षतिपूर्तिको माग, कति उचित ?
२०७७ साउन १० गते ११:५०
काठमाडौं । अन्ततः प्रख्यात नायक भुवन केसी र चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको झगडा अदालतसामु पुगेको छ । नायक केसीले साम्राज्ञीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
त्यो पनि १० करोडको क्षतिपूर्ति मागसहित काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । नायिका साम्राज्ञीले विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार नायक केसीविरुद्ध बोल्दै आएकी थिइन ।
साम्राज्ञीले भिडियो लाइभमार्फत दिएका अभिब्यक्ति र आरोपले आफ्नो मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको भन्दै नायक केसी अदालतको शरणमा पुगेका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०६४ को गाली बेइज्जतिसम्बन्धी कसूरको बेइज्जति गरेमा हुने सजाय (१) मा बेइज्जति गरे वा गराइएको प्रमाणित भएको खण्डमा दुई वर्षसम्मको कैद वा २० हजारसम्मको जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
साथै विद्युतीय माध्यमबाट अथवा अन्य सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जति गरे वा गराइएको प्रमाणित भए थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । नायक केसीले चरित्र हत्या गरेको भन्दै कलाकार संघमा समेत उजुरी दिएका छन् ।
साम्राज्ञीले नायक केसीमाथि दुरब्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि विवाद चलचित्र संघ हुँदै अदालतसम्म पुगेको हो । के यो विवाद मिलापत्र होला ? या यसको नतिजा कतातिर जाला ? त्यो थाहा पाउन भने अझै कुर्नु पर्नेछ ।